Awesome weather YoWindow - live wallpaper, widgets 2.13.16 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.13.16 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ရာသီဥတု Awesome weather YoWindow - live wallpaper, widgets
Awesome weather YoWindow - live wallpaper, widgets ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်ရုံတစ်🌈မှော်ရာသီဥတု app ကိုတွေ့ရှိရ!
ဒါကြောင့်ပြင်ပမှာမိုးရွာမယ့်တဲ့အခါမှာ🌧️က app ထဲမှာမိုးရွာသည်နှင့်အလူတို့သည်မိမိတို့ထီးဖွင့်လှစ်။
Birds ဂိမ်းသီဆိုနေကြသည်နှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကျေးရွာအတွင်းရှိအကြောင်းကို strolling နေကြသည်။ လူများနှင့်ကားများမြို့၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံ။ လေယာဉ်ဟာလေဆိပ်သို့လေယာဉ်ဆင်းသက်နေကြသည်။ သိုးချိုင့်၌စားကျက်နေကြသည်။
🍂အဆိုပါရှုခင်းသင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာသဘာဝအပြောင်းအလဲများကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့,5ကြိမ်တစ်နှစ်ပြောင်းလဲစေပါသည်။
သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအပေါ်ရာသီဥတု📷။ YoWindow ဆိုရာသီဥတု, နေထွက်, နေဝင်ဆည်းဆာနှင့်ဓာတ်ပုံပေါ်တွင်မွန်း၏အဆင့်ကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တို့၏ပြတင်းပေါက်ကနေမြင်ကွင်းကို။
☀️ဗြိတိန်, အင်္ဂလန်, ဝေလနယ်, အိုင်ယာလန်များအတွက်တိကျမှန်ကန်သောရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်။
high-တိကျစွာရာသီဥတုသတင်းရင်းမြစ် - Foreca (nowcasting), yr.no (met.no), METAR, အမျိုးသားမိုးလေဝသဌာန (NWS), မိုးလေဝသမြေအောက်, ပွင့်လင်းမိုးလေဝသမြေပုံ။ အဆိုပါခန့်မှန်းချက်ကိုအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံခြားရာသီဥတုဘူတာ, ရေဒါများနှင့်ဂြိုဟ်တုပုံရိပ်တွေကနေဒေတာတွေကိုအပေါ်အခြေခံသည်။
ပင် 14 ရက်မတိုင်မီတပတ်ကျော်, မနက်ဖြန်, ယနေ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု Watch နှင့်!
- ရေအပူချိန် (Foreca) ။
- အပူချိန် "ကဲ့သို့ခံစားရ" ။
- မိုးရွာရွာ၏ခွင့် (Foreca) ။
🗽The app ကိုအလိုအလျှောက်သင့်တည်နေရာမှာရာသီဥတုပြသထားတယ်။ လန်ဒန်, အောက်စ်ဖို့, မန်ချက်စတာလီဗာပူးသို့မဟုတ် Slough - သင်အခုဘယ်မှာဒါဟာအရေးမထားဘူး။ သင်အမြဲသင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာတိကျမှုခန့်မှန်းချက်ကိုရပါလိမ့်မယ်။
🍭သင့်ရဲ့ Android ပျော်ရွှင်စေပါ။
- တဲ့ Live Wallpaper - သင့် Desktop ပေါ်မှာ YoWindow ၏ကာတွန်းရာသီဥတုက။
- သော့ခတ် screen ပေါ်မှာ Wallpaper ။
- မိုးလေဝသ Widgets တွေ (နာရီနှင့်ရာသီဥတု widget, အပတ်စဉ်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်, 14 နေ့ကရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ယနေ့ရာသီဥတုအဘို့အဝစ်ဂျက်) ။
- Radar နှင့်မိုးလေဝသမြေပုံ။
- ရာသီဥတုနှင့်အတူနှိုးစက်နာရီ - တဦးတည်းအတွက်နှစ်ခုကို - သဘာဝတရား၏အသံမှနိုးထ။
- Screensaver နှင့် (နေ့ခင်းအိပ်မက်) "ဖုန်း screen ပေါ်မှာရာသီဥတု။ "
လန်ဒန်, ဘာမင်ဂမ်, လိဒ်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham, ကိုင်ရို, Las Vegas မှာ, ဗင်းနစ်, ကျူးဘား, တိုကျိုနှင့်အခြားသူများရာပေါင်းများစွာ။ မြို့သူမြို့သားဓာတ်ပုံအမှန်တကယ်ရာသီဥတုအခြေအနေဒါမှမဟုတ်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ထင်ဟပ်နေသည်။
Awesome weather YoWindow - live wallpaper, widgets အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Awesome weather YoWindow - live wallpaper, widgets အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Awesome weather YoWindow - live wallpaper, widgets အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Awesome weather YoWindow - live wallpaper, widgets အား အခ်က္ျပပါ
superuser4k စတိုး 46.6k 28.02M
Awesome weather YoWindow - live wallpaper, widgets ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Awesome weather YoWindow - live wallpaper, widgets အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.13.16
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://yowindow.com/mobile_privacy_policy.php
App Name: Awesome weather YoWindow - live wallpaper, widgets
Release date: 2019-07-12 04:46:29
လက်မှတ် SHA1: FC:0B:8C:53:98:D3:0D:74:CB:5A:0C:2C:04:DA:72:7A:C3:52:D4:54
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Pavel Repkin
အဖွဲ့အစည်း (O): RepkaSoft
Awesome weather YoWindow - live wallpaper, widgets APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ